Mpianatra mpikatroka miisa efatra nosamborina tany Hong Kong noho ny ‘fandrisihana fisintahana’ tao amin’ny tambajotra sosialy · Global Voices teny Malagasy
Nifototra tamin'ny lahatsoratra an-tambajotra sosialy ny porofon'ny fisamborana
Voadika ny 11 Aogositra 2020 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Català, Ελληνικά, Français, Español, Esperanto , Deutsch, English
Tony Chung, sivy ambiny folo taona, iray amin'ireo efatra voasambotra. Sary nalain'i Kris Chung / HKFP.
Navoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 29 Jolay 2020 ny lahatsoratra eto. Navoaka indray ato amin'ny Global Voices izany noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nisambotra tanora miisa efatra izay 16 ka hatramin'ny 21 taona ny sampan-draharaha vaovaon'ny Polisim-pirenena any Hong Kong noho ny fiahiahiana azy ireo ho nandrisika fisintahana teo ambanin'ny Lalàna Vaovao momba ny Fiarovam-pirenena lany tamin'ny 29 Jolay. Avy amin'ny votoatin'ny fitantarana nataon'izy ireo tao amin'ny tambajotra sosialy ny porofo nitarika ho amin'ny fisamborana azy ireo.
Iray amin'ireo efatra voasambotra i Tony Chung, 19 taona, tompon'andraikitry ny vondrona mpanohana ny fahaleovantenan'i Hong Kong Studentlocalism teo aloha. Nentin'ny tompon'andraikitry ny fiarovam-pirenena ihany koa ilay mpitondra tenin'ny vondrona teo aloha, Ho Nok-hang sy ilay mpikambana teo aloha Yanni Ho.
Nanao fanambarana ny vondrona mpanohana ny fahaleovantena fa noravana sy nahilika ireo mpikambana rehetra ao Hong Kong tamin'ny 30 Jona, iray andro talohan'ny nampiharana ny Lalànan'ny Fiarovam-pirenena tany Hong Kong.
Na izany aza, nilaza ny Studentlocalism fa nanangana sampana any Taiwan, Aostralia ary Etazonia ireo mpikambana ao aminy monina any ivelany.
Ity no fotoana voalohany nikendren'ny sampan-draharaha vaovaon'ny Fiarovam-pirenena ao Hong Kong vondrona politika sy nisamborany ireo mpiara-dia aminy noahiahiana araka ny lalàna nampiady hevitra izay manameloka ny fanonganam-panjakana, ny fisintahana, ny fampihorohoroana ary ny firaisana tsikombakomba amin'ny fitondrana vahiny. Nanazava tao amin'ny Twitter i Jeffie Lam, mpitati-baovaon'ny South China Morning Post:
Goavana izany: nosamborin'ireo tompon'andraikitry ny fiarovam-pirenena i Tony Chung ao amin'ny Studentlocalism noho ny fandrisihana fisintahana, hoy ny vondrony. Natao nandritra ny fihetsiketsehana ny fisamborana nitranga teo aloha izay nifandraika tamin'ity Lalanan'ny Fiarovam-pirenena ity. Ity no fisamborana voalohany natao taorian'ny fanadihadian'ny polisy. 19 taona izy.
Tamin'ny volana lasa teo, namoaka lalàna i Beijing hisorohana sy hampitsaharana ary hanasaziana ireo fihetsika ao Hong Kong izay heverina ho manohintohina ny filaminam-pirenena . Nampidirina tao anatin'ny lalàm-panorenana fohy ho an'ny tanandehibe ny lalàna, nandika ny lalana tao an-toerana ary nanome fahefana midadasika ho an'ny polisy.
Nilaza tamin'ny mpanao gazety i Steve Li, mpitantana ambony ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Fiarovam-pirenena fa nosamborina ny lehilahy miisa telo sy vehivavy iray 16 ka hatramin'ny 21 taona. Nambarany ihany koa fa mifototra amin'ny natioran'ny votoatin'ny fitantarana nataon'izy ireo tao amin'ny tambajotra sosialy ny fisamborana azy ireo. Nilaza ny lahatsoratra voalaza fa hampiasa ny fomba rehetra izy ireo hananganana Repoblika ao Hong Kong, ary hampiray ny vondrona politika rehetra mpiaro ny fahaleovantena.
Nitanisa ny andininy faha-21 amin'ny lalàna i Li izay milaza fa midika fandrisihana ny fanaovana fanambarana mampiroborobo ny fisintahana, ary tsy ilaina ny manombatombana raha toa ka nisy olona voasariky ny votoaty toy izany. Nilaza i Li hoe:
Nampiseho ny loharanom-baovao sy ny fanadihadiana nataonay fa nanambara tamin'ny tambajotra sosialy vao haingana ny vondrona ny amin'ny fananganana fikambanana manohana ny fahaleovantenan'i Hong Kong.
Nohamafisiny fa taorian'ny nampiharana ny lalànan'ny fiarovam-pirenena no navoaka ilay lahatsoratra na dia tsy nambarany mazava aza ny vondrona sy ny lahatsoratra voarohirohy tamin'izany. Naneho ny hatezerany i Nathan Law, mpikatroka any an-tsesitany avy ao Hong Kong:
Voasambotra araka izany ny mpianatra noho ny LAHATSORATRA TAO AMIN'NY TAMBAJOTRA SOSIALY. Lety e. Tena mipararetra ny firenena manoloana ny lahatsoratra nalefan'ny vondrona tanora.
Voafaritra ao amin'ny Andininy faha-20 amin'ny lalànan'ny fiarovana ny fisintahana araka ireto andininy ireto: ny fandraisana anjara, ny fikasana na ny fananganana … fihetsika fisintahana… na mampiasa hery na tsia na mandrahona ny fampiasan-kery.” Gadra mandrapahafaty no sazy farany ambony indrindra.
Tamin'ny 17 Jolay, nanambara ny fijoroany tao amin'ny tambajotra sosialy niaraka tamin'ny taratasy fisoratana anarana hidirana ho mpikambana ny vondrona antsoina hoe “Studentlocalism Diviziona Amerikana”.
【 Fidirana ho mpikambana Studentlocalism Diviziona Amerikana 】
Pr Prospect an'ny fizarana amerikanina US
Azafady tohizo ny famakiana amin'ny alàlan'ny fanindriana ireo sary etsy ambony, na mandehana mankany amin'ny pejinay Facebook ho an'ny lahatsoratra iray manontolo.
Fidirana ho mpikambana mpilatsaka an-tsitrapo Studentlocalism Diviziona Ampitan-dranomasina: https://t.co/SHyjjJlf1e pic.twitter.com/cBEij51byv
Milaza izany fa “hampiroborobo ny fiarovana ny fahaleovantenan'i Hong Kong ho an'ny teratany Hongkongers any Amerika ny sampana any Amerika ary ny fahalalahana hitia ny Amerikana, handresy lahatra an'i [Etazonia] hanohana ny nofinofinay amin'ny fahaleovantenan'i Hong Kong … [ary hanampy] ny Hongkongers hahazo indray ny zo mendrika ho azy hanapa-kevitra samirery, mba hahatrarana ny fahaleovantenan'i Hong Kong. ”
Efa nosamborina i Tony Chung teo aloha tamin'ny taona 2019 taorian'ny nandrohitany ny sainam-pirenena Shinoa teny amin'ny tendrony.